सास फेर्न गाह्रो भएपछि नेता खनाललाई उपचारका लागि भारत लगिँदै
अस्पतालमा भर्ना भएका खनाललाइ देखियो स्वास्थ्यमा ठुलै समस्या, केहीबेरमा दिल्ली लगिंदै
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई थप उपचारका लागि नयाँदिल्ली लगिंदै छ । उनलाई बुधबार दिउँसो साढे बाह्र बजे दिल्ली लैजान लागिएको खनालको सचिवालयले जनाएको छ
एमाले प्रवेश गरेका पूर्व माओवादीहरुमा अर्को रडाको सुरु! ‘बादललाई नेता मान्दैनौं’ भन्दै यि नेताले चाले यस्ता कदम
काठमाडौ । एमालेमा प्रवेश गरेका पूर्व माओवादी नेताहरूमा अब अर्को समस्या उत्पन्न भएको छ । एमाले भित्रकै रडाकोका कारण आफुहरुले कुनै अवसर पाउने सम्भावना नभएपछि पूर्व माओवादी नेताहरु अब संगठित
माओवादी छोडेर ओलीतिर लागेका बादल लगायतका नेताहरुको थप बिल्लीबाँठ ! यस्तो हुँदैछ थप परिघटना
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा भंग गरेर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएपछि केही नेताहरुले पार्टी परिवर्तन गरे । नेकपा माओवादी केन्द्रमा लामो राजनीतिक जिवन विताएकाहरुले एमालेका केपी
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)भित्रको विवाद चर्किंदै फुटको संघारमा पुगेको भए पनि संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्ष दुवै संयमित हुन पुग्दा पार्टी एकजुट हुने संकेत देखिएको छ । पछिल्ला
‘वाह रे ! खड्गप्रसाद एण्ड कम्पनीको नयाँ विधिशास्त्र, चोरले पनि उल्टै मुद्दा हाल्ने ?
काठमाडौ । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी नेपालको दुवै पक्षले एक अर्काले गरेको कारवाही विधि सम्मत नभएको भन्दै निर्णय दिएपछि जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले कटाक्ष गरेका छन् ।
एमालेमा सुखद सन्देश ! पानी बाराबार भएका नेता पनि अब यसरी मिल्न थाले
नेकपा एमालेको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालबीच पानी वारावारको अवस्था छ । सामाजिक सञ्जालमा दुई पक्षका नेताहरु एक अर्का विरुद्ध आगो ओकलीरहेका
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाल अस्पताल भर्ना भएका छन् । स्वास्थ्यमा आएको समस्याका कारण खनाल सोमबार बिहान थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएका हुन् । ‘पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको
गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय ‘पहिलो गाँसमै ढुङ्गा’
पोखरा । ‘लौ हेरम् तमासा ! मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकमै सुविधाबारे छलफल ! लगभग दुई महिनाको लकडाउनले गरीव जनताहरू भोकभोकै छन् ! खै तिनको समस्यामा ध्यान पुगेको ? कोरोनाको खोप नभएर
नेपाली कांग्रेस लमजुङका पूर्वसभापति एवं पूर्वसांसद हरिभक्त अधिकारीको निधन भएको छ । विगत सात वर्षदेखि मधुमेह, उच्च र’क्तचा’पलगायतका रोगले थलिएर ओछ्यानमै रहनुभएका अधिकारीलाई कोभिड सङ्क्रमण देखिएपछि जेठ २८ गते मनमोहन